Marigold tsara indrindra manamboatra mpanamboatra Lutein sy orinasa | CCGB
Marigold mitrandraka Lutein
Chenguang Biotech - mpamatsy famokarana lutein manandanja indrindra
Vokatra nalaina voajanahary manan-karena amin'ny Lutein carotenoid
Modely famokarana lehibe, mitohy ary mandeha ho azy
Manampy amin'ny fitazonana ny maso sy ny ati-doha mahasalama
Patent amerikana: US 9,921,615, B2
Source Botanical: Voninkazo Marigold
Ny karotenoid dia malaza amin'ny fananana simika sy biolojika, indrindra amin'ny fisorohana aretina. Ity carotenoid Lutein ity dia azo avy amin'ny a
loharano voajanahary:Voninkazo marigold, amin'ny alàlan'ny dingam-paty ataonay (US Patent: US 8,921,615, B2)
Lutein dia atolotra ho famenon-tsakafo hanomezana vola ilaina amin'ity carotenoid manan-danja ity ho an'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny asany. Izahay dia tsy mahazo ampy ny Lutein amin'ny sakafo mahazatra.
Mamboly marigold 13 500 hektara manerana ny faritanin'i Xinjiang, faritanin'i Yunnan, India ary Zambia izahay. Ny lamina fivoaran'ny kaomandy «Orinasa + Base + Acqu acquisition + tantsaha» dia mampiroborobo ny tantsaha amin'ny fambolena ambaratonga lehibe, fitantanana henjana.
Chenguang Biotech dia manana fitaovana fitrandrahana tsy miovaova mitohy, miaraka amina 30 taonina isan'andro, izay afaka manome famatsiana entana ny mpanjifa.
Fanaraha-maso kalitao azo antoka
Manana ekipa mahay mandanjalanja izahay, fitaovana fanandramana mandroso, ary rafitra fitiliana kalitao feno.
Natsangana ny rafitra fitantanana kalitao ho an'ny gadona indostrialy iray manontolo mba hiantohana ny fahamendrehana sy ny fahamarinan'ny kalitaon'ny vokatra, ary ny fanondranana vokatra dia mifanaraka amin'ny fenitra amerikanina, EU, japoney ary koreana.
Ny tombotsoan'ny Lutein dia misy
☆ Fampihenana ny risika ny degeneration Macular mifandraika amin'ny taona (AMD)
☆ Fanatsarana ny fiasan'ny maso amin'ny AMD
☆ Fanatsarana ny fiasan'ny maso
☆ Fanatsarana ny fiasan'ny kognita
☆ Fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana amin'ny mararin'ny Alzheimer
☆ CCGB dia manana velaran-javamaniry marigold 33000 hektara mahery kokoa, karazana varimbazaha, residu amin'ny famonoana otrikaina, manampy ny anti -oksidena sns.
☆ CCGB dia mpitarika mahatsapa tsipika famokarana mandeha ho azy any Shina, manana kalitao avo lenta
☆ Ny fahaiza-manao dia 30,000.00kg kristaly sy ny rojo kristaly, vovoka, fampiatoana solika, vakana, miaraka amin'ny kalitao miavaka sy ny vatsy maharitra
☆ Patent amerikana: US 9,921,615, B2
☆ Vovoka Lutein 5% & 10% & 20% & 40% （HPLC / UV
☆ Solika Lutein 6% & 20% HPLC
☆ Lutein 5% azo vonoin'ny rano
Halaviro ny hazavana sy ny hafanana mahery; amin'ny toerana mangatsiaka sy maina; fonosana feno sy tery, ny fiainana talantalana dia 24 volana mahery ao anaty fonosana tsy nosokafana. Vantany vao nosokafana dia ampiasao haingana ny atiny.
Famaritana sy fampiasana
5% -50% Takelaka 1KG / Alu Bag ao anaty Drum 25KG
10% 20% Kapsule malefaka 20KG / HDPE amponga miaraka amin'ny Carton
50% 10% Tablety, kapsily mafy 1KG / Alu Bag ao anaty Drum 25KG
5% 10% Kapsule malefaka, zava-pisotro ary sakafo 1KG / Alu Bag ao anaty Drum 25KG
75% 80% manao vovoka, menaka, vakana 1KG / Alu Bag ao anaty Drum 25KG
Teo aloha: marigold extract-zeaxanthin